Wararka Maanta: Axad, Oct 24, 2021-Guriceel : Xaaladda magaalada oo caawa deggen kadib dagaallo labo maalin ka socday
Guddoomiyaha Guriceel, Faarax Cabdi Macalin, oo la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka dowladda, ayaa sheegay in ay guud ahaan xaqiijiyeen gacan ku haynta amniga guud ee magaalada, isla markaana wuxuu sheegay in ay haatan howlgallo ka socdaan dhinaca waqooyi ee magaalada Guriceel.
Guddoomiyuhu wuxuu sheegay in ay ciiddamadu go’doomiyeen koox katirsan ciiddamada Ahlusunna oo uu sheegay in ay rasaas kasoo ridayaan dhinaca jaamacaddaha oo ah waqooyiga magaalada, halkaas oo ay isku arursadeen.
“Dhammaan dhawacyadoodii iyo maydadkii ay ka carareen magaalada ayay dhooban yihiin, khasaare xooggan ayaa soo gaaray, mana ku faraxsanin in dad Soomaaliyeed dhintaan, waayo waa dhallinyaro walaalaheen ah oo lasoo qalday,” ayuu yiri guddoomiyaha Guriceel, Faarax Cabdi Macalin.”
Ku dhawaad 30 qof ayaa ku dhintay, tiro ka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaaladdii shalay iyo maanta ka dhacay Guriceel. Sidoo kalena boqolaal kun oo dadweyne ah ayaa guryahooda uga barakacay colaadda halkaas ka jirta.